Maya. 10 Xaqiijinta Da'da iyo Shirka Caalamiga ah ee Gaarka ah
Bogga ugu weyn Maya. 10 Xaqiijinta Da'da iyo Shirka Caalamiga ah ee Gaarka ah
Julaay 2020 waxay u cadeyneysaa bil la yaab leh TRF, iyadoo laba mashruuc oo waaweyn oo caalami ah ay miro dhaleen. Waxaan ku taageereynaa riixitaanka sharciga xaqiijinta da'da ee filimada qaawan ee Boqortooyada Midowday iyo adduunka oo dhan Warbixintayada Shirka Xaqiijinta Da'da. Isla mar ahaantaana, waxaan ku dareynaa waxyaabo badan doodda caalamiga ah ee ku saabsan sawir-gacmeedka iyada oo loo marayo ka-qaybgalka Shirka Isbahaysiga 2020 ee Joojinta Sumcadda Isticmaalka Galmada.
Hay'adda Reward Foundation waxay kaqeybqaadaneysaa Isbaheysiga 2020 ee Joojinaya Ka Hortagga Galmada Isticmaalka Khadka Tooska ah ee Caalamiga ah inta udhaxeysa 18 iyo 28 Julaay. Waxaan bixinaynaa seddex wadahadal: Filimada Internetka ee Pornography iyo Maskaxda Dhallin-yarada; Pornography Internetka iyo Isticmaalayaasha leh Ciladaha Autistic Spectrum iyo Baahiyaha Waxbarashada Gaarka ah; iyo Khariidad loogu talagalay Cilmi-baarista Mustaqbalka ee Adeegsiga Filimmada Dhibaatada leh. Iyadoo ay ku hadlayaan 177 iyo in kabadan 18,000 oo kaqeyb gala in kabadan 100 wadan, waa dhacdadii ugu balaarneyd ebed ee goobtan.
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in shirku BILAASH yahay kaqeybgalka. Haddii tani ay xiisayso xiisahaaga, guji halkan si aad isu diiwaangeliso maanta oo aad noogu soo biirto qibradan layaabka leh.
Pornography Internet iyo Maskaxda Dhallinyarada
Mary Sharpe waa af-haye caan ah oo ka hadlaya shirweynaha dooda ugu weynaa maalintaas 27 Luulyo.
Hay'adda Reward Foundation waxay ku socotaa istaag Exhibitor ah shirkan. Waxaa jira tartan lagu guuleysto mid ka mid ah shan nuqul oo ka mid ah buugga Gary Wilson - Maskaxdaada on Porn.
23/24 Luulyo 2020
27/28 Luulyo 2020
Xaqiijinta Da'da ee Pornography
Bishii Juun 2020, Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta Reward Foundation waxay isla abaabushay shir ballaadhan oo ku saabsan Xaqiijinta Da'da. Saaxiibkeen hogaamiyaha wuxuu ahaa John Carr, OBE, Xogheyaha Isbahaysiga Samafalka Carruurta ee UK ee Amniga Internetka. Mawduuca wuxuu ahaa baahida sharciga xaqiijinta da'da ee filimada qaawan. Munaasabadda waxaa ka mid ahaa u doodayaasha daryeelka carruurta, garyaqaanno, aqoonyahanno, saraakiil ka tirsan dowladda, dhakhaatiirta neerfaha iyo shirkadaha teknolojiyadda oo ka kala socday sagaal iyo labaatan dal. Waa kan la daabacay warbixintii ugu dambeysay.
Shirka ayaa dib loo eegay:
Caddayn ugu dambaysay ee laga helo qalliinka neerfaha ee muujinaya saameynta muuqaalka weyn ee muuqaalka qaawan ee maskaxda dhalinyarada
Xisaabaadka ka socda in kabadan labaatan dal oo ku saabsan sida siyaasada guud ay u horumarineyso marka la eego xaqiijinta da'da khadka tooska ah ee websaydhada
Tiknolojiyad kaladuwan ayaa hada la heli karaa si ay u fuliyaan xaqiijinta da'da waqtiga dhabta ah
Xeeladaha waxbarasho ee lagu ilaaliyo carruurta in lagu dhammaystiro xalalka farsamada
Carruurtu waxay xaq u leeyihiin inay ka badbaadaan waxyeellada dowladuna waxay ku leedahay waajibaad sharci ah inay bixiso. Intaa intaas ka badan, carruurtu waxay xaq sharci u leeyihiin inay helaan talo wanaagsan. Iyo xuquuqda helitaanka, da'da ku habboon waxbarashada ku saabsan galmada iyo qaybta ay ka ciyaari karto xiriir caafimaad qaba, farxad leh. Tan waxaa sida ugu fiican loogu bixin karaa iyadoo la eegayo qaab-dhismeedka caafimaadka bulshada iyo waxbarashada. Carruurtu xaq sharci uma lahan inay kufsadaan.
Tikniyoolajiyadda xaqiijinta da'da ayaa u gudubtay heer la qiyaasi karo, nidaamyo la awoodi karo. Waxay xaddidi karaan gelitaanka iyaga oo ka yar 18-ka bogagga qaawan ee internetka. Waxay tan sameysaa iyadoo isla markaa la ixtiraamayo xuquuqda asturnaanta ee dadka waaweyn iyo carruurta.
Xaqiijinta da'da ma ahan xabad qalin ah, laakiin waa hubaal a xabad. Waana rasaas si toos ah loogu talagalay in lagu diido kuwa ka ganacsada qaawan ee internetka ee dunidan door kasta oo lagu go'aaminayo isdhexgalka galmada ama waxbarashada galmada ee dhalinyarada.
Cadaadiska dowlada kadib go’aankii maxkamada sare
Arrinta kaliya ee laga qoomameynayo UK waqtigan xaadirka ah ayaa ah inaanan wali wax fikrad ah ka haynin goorta tallaabooyinka xaqiijinta da'da ee Baarlamaanku isku raacay ay dhaqan-geli doonaan. Toddobaadkii hore go'aanka maxkamadda Sare ayaa laga yaabaa inay horay noogu dhaqaaqdo.
Ayuu yidhi John Carr, OBE, Boqortooyada Midowday, waxaan ugu yeeray Wakiilka Warfaafinta inay bilaabaan baaritaan iyadoo la eegayo xaqiijinta horudhaca ugu horreeya ee suurtagalka tignoolajiyada xaqiijinta da'da, si loo ilaaliyo caafimaadka maskaxda iyo wanaagga carruurteenna. Adduunyada oo dhan, asxaabta, saynisyahannada, siyaasadaha sameeya, sadaqada, qareennada iyo dadka daryeela ilaalinta carruurta ayaa sidaas oo kale sameynaya sida warbixinta shirku si muuqata u muujineyso. Waqtiga ficilku hadda waa. ”